GeckoLinux inotangisa yayo yekutanga vhezheni yakavakirwa pane yakavhurikaSUSE Leap 15 | Kubva kuLinux
GeckoLinux inotangisa yayo yekutanga vhezheni yakavakirwa pane yakavhurikaSUSE Leap 15
Dare rekuvandudza riri kumashure kweGeckoLinux rakaburitsa ruzivo nezve kuburitswa kweshanduro nyowani yesystem yavo, iyo kutanga kwakavakirwa pa OpenSUSE Leap 15.
Kune avo vasingazive nezve GeckoLinux, iko kugoverwa kweLinux kunoenderana neiyo OpenSUSE sisitimu inoshanda yakanangana nevashandisi vakajairika, ichipa ruzivo rwakakwenenzverwa uye rwakareruka. GeckoLinux inowanikwa mumatavi maviri akasiyana, iro Bazi reStatic, rakavakirwa paOpenSUSE Leap, uye iro Rolling bazi rakavakirwa paOpenSUSE Tumbleweed, ese ari maviri nesarudzo yekusarudza dzakawanda dzinozivikanwa nharaunda dzeLinux graphical.
Sezvo iwe uchigona kuverenga mune chiziviso, "GeckoLinux Static yaive yakavakirwa pane iyo OpenSUSE Leap yekuparadzira bhizinesi pamwe nekubatanidzwa kwepakeji epakeji kubva kuPackman chirongwa," kune rimwe divi "GeckoLinux Rolling yakavakirwa pane yakachengeteka OpenSUSE Tumbleweed kugoverwa pamwe nekubatanidzwa kwe zvivakwa zvechirongwa chePackman. "
Chii chitsva muGeckoLinux Yakagadzika 150.180607 uye Rolling 999.180607
Nezvazvino kuburitswa, GeckoLinux Yakagadzika 150.180607 uye Rolling 999.180607, ivo vagadziri vakachinja vakawedzera vhezheni dzazvino enzvimbo dzakakurumbira dzeLinux. Semuenzaniso, muGeckoLinux Rolling 999.180607 inowanikwa kurodha pasi ne GNOME 3.28, KDE Plasma 5.12.5 LTS, Cinnamon 3.8.3, MATE 1.20, Xfce 4.12, uye LXQt 0.12.
Kubva pane ichangobva kuburitswa OpenSUSE Leap 15, GeckoLinux Stable 150.180607 inouya ne GNOME 3.26, KDE Plasma 5.12.5 LTS, Cinnamon 3.6.7, MATE 1.20, Xfce 4.12, uye LXQt 0.12.0. Mukati medu tinowana iyo Linux kernel 4.12.14 nepo iyo Rolling vhezheni ichishandisa iyo Linux kernel 4.16.12. Mapazi ese ari maviri anouya ne Firefox 60 uye LibreOffice 6.0.4.
Iwo maviri edhisheni zvakare anogovera akafanogadzirirwa ekuchengetedza ezvimwe software izvo zvinopa mushandisi nemaapplication kubva kumakambani senge Google, Microsoft kana Nvidia. GeckoLinux inogona zvakare kutorwa pasi isina graphical nharaunda kune avo vanoda kuisa nharaunda vega. Chero chipi zvacho chekugovera chinogona kutorwa pasi kubva kune yepamutemo webhusaiti izvozvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » GeckoLinux inotangisa yayo yekutanga vhezheni yakavakirwa pane yakavhurikaSUSE Leap 15
Puigdemont 64bits akadaro
Isa zvinongedzo kune peji… zvine hungwaru….
Wikipedia inogona kunge iri munjodzi nekuda kwemutemo mutsva weEuropean wekodzero
Pingus: yemahara uye yakavhurwa sosi Lemmings dombo